सात दिनभित्रमा तपाइले सोचेको काम बन्नेछ , ॐ लेखि सक्दो से’यर गरौं – Krazy NepaL
सात दिनभित्रमा तपाइले सोचेको काम बन्नेछ , ॐ लेखि सक्दो से’यर गरौं
January 27, 2021 440
७ दिन भित्रमा तपाइले नसोचेको काम बन्नेछ बिल्कुलै बेवस्ता नगर्नुहोला !!! ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐपरापूर्व काल देखी अहिले सम्म शिवलि’ङ्गलाई किन पुजा आजा गरी मान्छन ? किन के का लागि पुजा गर्छन । अन्य धर्मका मानिसहरु आफ्ना साना—साना बच्चालाई भन्छन् कि हिन्दुहरु लिं’गलाई पुजा गर्छन् ।सबैलाई संस्कृतको ज्ञान पनि हुँदैंन ।
आउनुस् यसको अर्थ जान्नुस् र भ्र’मबाट बच्नुहोस्ः लिं’गको अर्थ संस्कृतमा चिन्ह, प्रतीक हुन्छ ।शिवलिंगको अर्थ शिवको प्रतीक भन्ने हुन्छ । पुरुष लिं’गको अर्थ पुरुषको प्रतीक भन्ने हुन्छ । यसैगरी स्त्रीलिं’गको अर्थ स्त्रीको प्रतीक भन्ने हुन्छ । र नपुसंक लिं’गको अर्थ नपु’संकको प्रतीक भन्ने हुन्छ ।आखिर के हो त शिवलिं’ग ?
जस्तोः प्रकाश स्तम्भ/लिं’ग, अग्नी स्तम्भ/लिं’ग, उर्जा स्तम्भ/लिं’ग आदि ।ब्रह्माण्डमा दुई चीज छन् उर्जा र पदार्थ । हाम्रो शरीर पदार्थबाट निर्मित हुन्छ भने आत्मा उर्जा हो ।
Nextयी हुन् १५ मिनेटमै अनुहारको चमक बढाउने घरेलु उपाय
साउनमा किन माछामासु नखाने, किन उपवास बस्ने ?